Tsipahin’ny mpianatra thailandey sasany ny manao fanamiana sy mijoro hanao hiram-pirenena mandritra ny fianarana an-tserasera (anjotra) · Global Voices teny Malagasy
'Nampisy fifandirana manko nandritra ny fotoana vitsivitsy ny hiram-pirenen'i Thailandy'
Voadika ny 09 Aogositra 2021 4:13 GMT
Kolejin'ny manantalenta iray mitaky ny mpianany hanao fanamiana, hivavaka, ary hihiaka ny tarigetran'ny kolejy tamin'ny fihaonana Zoom maraina iray taloha mialoha ny hanombohan'ny fianarana anjotra. Loharano: Mpianatra Maditra.
Nitodika tany amin'ny media sosialy ny mpianatra Thailandey hitsikera ny ezaka nasionalista natao vao haingana izay nitakiana ny mpampianatra hampanaja ny sainam-pirenena amin'ny mpianatra, hivavaka manoloana fakantsary, ary hanao fanamiana mandritra ny kilasy anjotra.
Araka ny kaontin'ny mpianatra, misy ireo mpampianatra mitaky amin'ny kilasiny hijoro sy hanaja ny sainam-pirenena isan'andro amin'ny valo ora maraina mialoha ny fianarana anjotra. Mpampianatra iray mitaky amin'ny mpianatra handefa porofon-tsarin-dry zareo mijoro hanaja ny hiram-pirenena horaketina.
“Rahampitso ny mpianatra tokony hijoro hanaja ny sainam-pirenena amin'ny valo ora maraina eo anoloan'ny fahitalavitra ao an-trano ary haka sary sy handefa izany amiko,” hoy ny mpampianatra iray avy amin'ny sekoly iray ao Ubon Ratchathani tamin'ny alalan'ny Line.
Io resadresaka io, rehefa nofafana ny anaran'ilay mpampianatra, dia navoakan'ny pejy Facebook mpianatra maditra, vondrona mpianatra mpikatroka miantso ny hanavaozana ny fanabeazana ao Thailandy, tamin'ny 8 jona. Nalaza haingana anjotra ny tsanganana izay nahazo setriny 13k, zara 23k, ary fanehoan-kevitra 3.5k izay tsikera no betsaka.
“Mihamijotso isan'andro ny mpianatra Thailandey,” hoy ny fanehoan-kevitra iray.
“Aza ajanona ireo. Tokony hotohanana manerana ny firenena manomboka akaninjaza ka hatramin'ny oniversite iza. Tsy maintsy tia tanindrazana isika. Atao imbetsaka izany mandrapahatonga ny fampitam-baovao vahiny hitatitra azy. Asehoy azy ireo ho tahaka ny ahoana ny fanabeazana Thailandey. Aza ozonina ry zareo. Hofahofay tanana ry zareo,” hoy ny fanehoan-kevitra iray maneso.
Tamin'ny hetsika iray hafa, tamin'ny valo jona ny Mpianatra Maditra nitatitra fa kolejin'ny manantalenta iray no nitaky ny mpianatra hanao fanamiana, hivavaka, ary hihiaka ny tarigetran'ny kolejy amin'ny fotoana maraina ao amin'ny Zoom mialoha ny hanombohan'ny kilasy anjotra. Nilaza ny mpianatra maditra fa mahazo tsy manao fanamiana ny mpianatra rehefa vita ny lanonana maraina.
Rehefa nihabetsaka ny tsikera, namaly tamin'ny 8 jona i Amporn Pinasa, sekretera jeneralin'ny Biraon'ny Vaomieran'ny Fanabeazana Fototra ao Thailandy, fa tsy nanome izany baiko izany ny Minisiteran'ny Fanabeazana, fa tokony jerena avy amin'ny fomba fijery hafa izany. Mety sady manavao izany fanao vaovao izany raha mifanaraka handray anjara ny mpampianatra sy ny mpianatra.
Na izany aza, nanampy i Pinasa fa azo lazaina ho tsy mety izany raha tsy manaiky ireo politika (lalàna) ireo ny mpianatra.
Nampisy fifandirana ara-politika ho an'ny sasany manko tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay tao Thailandy ny hiram-pirenena. Nandritra ny hetsika prô-demaokrasia taona 2020 manko, maro ireo mpianatra no nanao fiarahabana rantsa-tanana telo mandritra ny fihirana ny hiram-pirenena — fomba fanehoana izay indraindray miafara amin'ny fampiatoana na fanesorana ny sata na zo maha-mpianatra hanohy ny fianaran'izy ireo.
Tamin'ny Oktobra 2020, vehivavy iray 45 taona mivarotra roti no namelaka tehamaina zazavavy iray nanao ny fanamiana maha-mpianatra noho ny tsy nijoroany nandritra ny fihirana ny hiram-pirenena. Tonga fotoana ilay zazavavy ka izany no tsy nahafahany nijoro. Nisy vondrona pro-governemanta iray nanome ilay namelaka tehamaina farafahakeliny 18.200 baht (577 dôlara amerikana) raha niatrika fitoriana ara-pitsarana avy amin'ny fianakavian'ilay mpianatra izy.
Lasa lohahevitra nampifanditra ny fanabeazana rehefa natomboka 1 jona ny enimbolana vaovao. Nandritra ny fielezan'ny Covid-19, tsy maintsy nanao fanitsiana maro ny sekoly thailandey, izay matetika fantatra ho tena mpandala nentindrazana sady tsirefesimandidy, rehefa notontosaina anjotra ny ankamaroan'ny fianarana an-dakilasy, ka naterina any an-tranon'ny mpianatra ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra.
Tamin'ny faraparan'ny volana mey 2021, niantso ny mpianatra hanao fanamiana ny Governoran'i Trat, Pinyo Prakobphon, mandritra ny fianarana anjotra, noho ny fiheverany fa hanatsara ny fitsipi-pifehezana sy ny zavabita ara-akademika izany. Nilaza izy fa ny sekoly no manapa-kevitra raha tokony ampiharina izany politika izany (na tsia). Tamin'ny hetsi-panoherana, namorona sivana fakantsary ny mpisera Facebook hanadrohadroana ilay politika. Amin'io sivana fakantsary io, tahaka ny manao fanamiana ilay mpianatra, nefa tsy miakanjo an'izany akory.